Amathayili afakwe ithayili, agxishiwe noma afakwe ngaphakathi Windows 10 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Windows 10 ifaka izindlela eziningi zokuhlela ngokuzenzakalela windows evulekile, kepha zifihliwe kancane futhi ngokuchofoza okukodwa kubha yomsebenzi, uma singazi, singagcina singabanaki naphakade.
Isibonelo, lapho uhambisa iwindi uye kolunye uhlangothi, kungenzeka ukuthayela amawindi ngokuhlukanisa isikrini kabili noma ngisho ezine (ngokuhudulela amawindi emakhoneni). Ungenza okufanayo ngokuchofoza esikhaleni esingenalutho kubha yomsebenzi ngenkinobho yegundane langakwesokudla bese usebenzisa inketho Beka amafasitela eduze komunye nomunye.
Usacindezela inkinobho yesokudla yegundane, ungakhetha inketho ku- bonisa amawindi afakiwe, okungenye indlela yokubeka, ukwahlukanisa isikrini ngokulingana.
Ngezinqamuleli zekhibhodi, lapho-ke, ungacindezela izinkinobho ndawonye Umcibisholo weWindows + up ukukhulisa iwindi, cindezela inkinobho Umcibisholo weWindows + phansi ukubuyisela iwindi kusayizi wayo omncane bese ucindezela izinkinobho futhi Umcibisholo weWindows + phansi ukunciphisa iwindi. kubha yomsebenzi.
Ngezinhlelo ezinjengePowertoys zeWindows 10, kuyenzeka kusebenze imisebenzi eyengeziwe ekhethekile, njengokudala ukwakheka kwewindi ngokwezifiso, ngokukhetha usayizi nomumo wewindi ngalinye elivulekile.
Sisengathola ama-atriums amaningi amaqhinga wokuhlela windows kwideskithophu yeWindows.
Kulesi sihloko sithola okunye okusebenziseka ngempela, okulula ukusebenziseka futhi okwenza ideskithophu ikhululeke kakhulu: ithuba lokungena kumawindi, ukuze ugcine uvulekele kwayishumi noma ngaphezulu ehlakazekile kudeskithophu, ubona isihloko sawo ukuze ukwazi ukuwabona ngeso lengqondo. konke ndawonye bese ukhetha ngokushesha.
Ku-Windows 10 ungachofoza kwesokudla kubha yomsebenzi bese ukhetha inketho "Dlulela kumawindi"ukuwafaka. Wonke amawindi angancishiswanga azolungiswa ngokushesha ngesitaki se-diagonal esihlahlayo, elinye phezu kwelinye, ngalinye lilingene ngokulingana. Ibha yesihloko yewindi ngalinye izoboniswa ngokugqamile, kwenze kube lula ukukwenza qhafaza esinye sazo ngesikhombisi segundane bese uletha iwindi ngaphambili.Ungaphinda uchofoze isithonjana esihlobene kubha yomsebenzi ukuletha ngaphambili.
Lapho impophoma seyakhiwe, ingakhanselwa ngokucindezela inkinobho yesokudla yegundane futhi kubha yomsebenzi bese ukhetha inketho "Hlehlisa ukugqagqana kwawo wonke amawindi"Kusuka kumenyu. Lokhu kuzobuyisa ukuhlelwa kwamawindi njengoba kwakunjalo ngaphambili. Kodwa-ke, uma uhambisa ifasitela elilodwa kuphela eligudlanayo, awukwazi ukuhlehlisa ukuhleleka kwe-cascade.
Qaphela ukuthi ukufakwa kwamawindows obekuvele kwakuyinketho ku-Windows 95, lapho izinsiza zekhompyutha zilinganiselwe futhi zinokuxazululwa okuphansi. Lolu hlobo lokubuka lufana kakhulu nalolo olutholakele, kuze kube muva nje, ngokucindezela okhiye beWindows-Tab ngasikhathi sinye (namuhla ku-Windows 10 ukubuka kwemisebenzi kuyavula).